Daawo sawirada sida Muqdisho looga xusay maalinta Afka Hooyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maanta oo ah 21-ka Febaraayo 2015 waxaa hotelka City Palace ee magaalada Muqdisho lagu qabtay xuska maalinta Afka Hooyo, iyadoo ay ka qeybgaleen madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
21-ka Febaraayo waa maalin caalami ah oo Jamciyada Qaruumaha ka dhaxeysa ay u aqoonsatay Maalinta Afafka Hooyo 17kii November Sanadii 1999-kii, waxaana Maanta Dunida oo dhan looga dabaal dagayaa xuska Maalintaan Caalamiga ah.
Wasiirka Warfaafianta Hidaha iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka ku hadlay Afka qaban qaabiyeyaasha munaasabadda ayaa waxa uu soo dhaweeyay kaqayb galayaasha, isagoo u mahad celiyay dhamaan intii ka qeyb gashay munaasabadda.
Wasiirka Hidaha iyo dhaqanka Jamhuuriyada Jabuuti, Aadan Xasan Aadan oo ka hadlay Munaasabada ayaa waxaa uu Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya uga Mahad celiyay sida uu uga aqbalay in Akadamaiyad Goboleedka Cilmiga iyo fanka laga furo Muqdisho.
Guddoomiyaha baarlamaanka Golaha Shacabka Soomaaliyeed, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawari ayaa ku dheeraaday ka hadalka Maalintaan iyo Muhiimada ay u leedahay Dadka ku hadla Af Soomaaliga, waxaana uu bogaadiyay Xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti in la sii xoojiyo, lagana wada shaqeeyo horumarinta afka Hooyo.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo Khudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay Munaasabadda ayaa mar kale ku celiyay isagoo ka hadlayay Muhiimada ay leedahay Afka hooyo in Xafiisyada Dowladda aan laga soo saari karin warqad Af qalaad ku qoran cidii ku dhaqaaqdana lala xisaabtami doono.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle oo isna xafladda hadal kooban ka jeediyay ayaa mahadcelin u jeediyay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo uu xusay inaysan iloobi doonin xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeysa labada shacab, waxaana uu Madaxweynaha Soomaaliya uu ku amaanay soo nooleynta Afka hooyo.
Munaasabadda waxaa lagu soo badhigay buugaag badan oo lagu qoray Afka Soomaaliga, sidoo kale waxaa lasoo bandhigay waxyaabo badan oo ay Soomaalidu sameyso iyo qeybo ka mid ah wax soo saarka dalka.
Dhanka kale, mar sii horreysay oo maanta ayaa labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Jabuuti dhagax dhigeen Akaadimayadda daryeelka Afka Soomaaliga, taasoo laga dhisayo degmada Shangaani ee Muqdisho.